တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မွေးရပ်မြေမှ ပေးစာ (၁)
Posted by မေဓာဝီ at 4:15 PM
ခြင်းများကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့နေရပြီပေါ့ ဟုတ်
ပြန်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းလည်း အတူတူမို့ လေယာဉ် ထိုင်ခုံရှေ့က စခရင်လေးကို ပြန်မြင်ရတဲ့အခါ ကျနော်လည်း စိတ်တွေ စောနေခဲ့တာ သတိရမိတယ် မမေ..၊ ပြီးတော့ အိတ်တွေ လာကူသယ်တဲ့ လူတွေ၊ ကားဟွန်းသံ၊ အပူချိန်၊ မောင်းချင်သလို မောင်းနှင်မှု..၊ ဒါတွေကိုလည်း တဝကြီး ခံစားခဲ့တာပဲ၊ မျက်နှာကို လာတိုက်တဲ့ လေနွေးနွေးကပဲ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ပြီ လို့ ကိုယ့်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပါးပုတ် နှိုးလိုက် သလိုပဲ၊
ထမ်းရွက်ရမယ့် တာဝန်တွေ၊ အငန်းအတာတွေကို မမေတစ်ယောက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာစွာနဲ့ ဆောင်ရွက် ပြီးမြောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ..။
4/06/2012 9:49 PM
နှစ်မျိုးစလုံးရဲ့ ရနံ့ တွေကိုတောင်ရမိသလိုဘဲ။
ပျောက်နေပါတယ်လို့ အောက်မေ့နေတာ ပြည်တော်ပြန်နေတာကိုးးးး
4/07/2012 4:32 AM
လက်စသပ်တော့ ရွှေပြည်ကြီး ပြန်ရောက်နေတာကိုး.
အလုပ်နဲ့ဘဲပြန်ပြန် အလည်ဘဲပြန်ပြန် တကယ်ကို ပျော်ရွှင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာဘဲနော်။ မမေ
ခုချိန်ပြန်တယ်ဆိုတော့ ပိတောက်ပန်း အနံ့လေးတောင် ရဦးမှာ သေချာတယ်
ဘယ်ပန်းတွေဘယ်လောက်လှလှ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပွင့်လေ့ရှိတဲ့ ပန်းတွေနဲ့ ပိတောက်ပန်းကိုတော့ မှီတယ်မထင်တာ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ရင်းဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အစစ အဆင်ပြေပါစေ မမေရေ
အယ်...ရွှေပြည်တောင် ရောက်နေမှကိုး...ဒါကြောင့် ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတာပေါ့လေ...
တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်နေတာကို လာလေ့လာတယ်ထင်ပါ့...အမေတော့ လွှတ်တော်ထဲရောက်နေပြီနော...
ဘာပန်းတွေဘယ်လောက်လှလှ ပိတောက်နဲ့ငုဝါကို မမြင်ရရင် ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာနဲ့ ခံစားရတာ အဲဒါ မြန်မာပေါ့ မမေရေ...မြန်မာ အစစ်ပေါ့...
သြော်... မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေတာလား...း).. ပျော်စရာကြီး..း))
how amazing.. i m your regular blog reader and now i am also in Myanmar to visit my parents. how i wish i could meet you......
မမေရေ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ခဲ့နော်..အလွမ်းပြေ ကြည့်ရအောင်
4/15/2012 1:39 AM
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်မိတော့ ပိုလွမ်းသွားသလိုပဲမမ.. အိမ်ပြန်ချိန်တွေ အားကျမိတယ်... မပြောင်းလဲသေးတဲ့ ဒေသဆိုပေမယ့် ညီမလေးတို့အတွက်တော့....အမေ့အိမ်ပဲ မဟုတ်လား...လေ။